Maxaa sababay Loolanka dalalka Shiinaha,Turkiga & Imaaraatka eek u aaddan dekedaha Jabuuti? | Maxaa sababay Loolanka dalalka Shiinaha,Turkiga & Imaaraatka eek u aaddan dekedaha Jabuuti? | Hal Sheegaha La Hubo
Maxaa sababay Loolanka dalalka Shiinaha,Turkiga & Imaaraatka eek u aaddan dekedaha Jabuuti?
Dowladda Jabuuti ayaa wax badan banaanka u soo saartay markii ay todobaadkii hore shaacisay iney ka baxday Heshiiskii ay kula jirtay Shirkada DP WORLD ee dekedaha u qaabilsan Imaaraatka Carabta, taas oo gacanta ku heysay mid kamid ah dekedaha dalkaas, ka dib markii uu Madaxweynaha Jabuuti ku eedeeyey in aysan ka soo bixin heshiiska la galay, lana helay musuqmaasuq ay sameysay.
Imaaraatku wey diideen in ay sameeyen khataro waa weyn iyo sharci jabin, waxayna taasi bedelkeda iska xaadiriyeen Maxkamad kutaala dalka UK oo ay horey labada dhinac ee DP WORLD iyo Jabuuti ugu kala baxeen, waxaana muuqata in hadda banaanka wax kasta u soo baxeen.
Xukuumada Abu Dhabi waxay welwel weyn ka qabtaa saameynta dawladdaha Turkiga & Shiinuhu ku hayaan geeska Africa, waxayan ciyaaraysaa doorkeda ku aadan in ay haysato sanado badan dekedaha muhiimka ah ee kuyaala badda Cas oo tartan furan lagali kara dekeda Jabal Ali Port ee dalka Imaaraatka Carabta ugu weyn.
Si loo ilaaliyo danaha Ganacsi iyo Suuq helida dekeda Jabal Ali ee dalka Imaaraatka ayaa la rumeysan yahay in ay Shirkada DP WORLD sahmin iyo la wareegid iskugu dartay dekedo muhiim ah oo kuyaala Jabuuti, Puntland & Somaliland, laakiin dhamaan heshiisyadaas ayaa ku suntan mudo 30 sanno gabi ahaantood, taas oo ah qorshe ay dajisay dawladda Imaaraatka Carabtu.
Jabuuti waxay ahayd cidii ugu horeysa ee iska eegta DP WORLD, waxayna gabi ahaanba ka joojisay howlo muhiim ah oo ay ka haysay gudaha dalkaas, ugu dambeyna 21-kii February 2018 war qoraal ah oo ka soo baxay Madaxweynaha dalkaas waxaa lagu joojiyey dhamaan heshiisyadii u dhaxeeyey DP iyo dawladda Jabuuti.
Tanni waxay abuurtay xiisad cusub oo ka bilaabatay arrimaha hadda taagan, waxaana wasaaradda Arrimaha dibada ee dalka Imaaraatka Carabtu si rasmi ah u shaacisay in howshu siyaasad faraha la gashay, ayna soo galeen wadamada Turkiga & Shiinaha oo ay ku eedeysay in ay dano ka leeyihiin dalkaas.
Go’aan la mid ah midka Jabuuti ay qaadatay Imaaradka Carabta waxaa qaatay Maamulka Somaliland.
Madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa amray in la joojiyo dhismaha saldhiga Militari ee Imaaraadka ay ka dhisaneyso Dekadda Ber ber.